ဈေးချိုနေ့ပွဲ - Yangon Media Group
ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး မိုးသားတိမ်လိပ်တွေနဲ့ ပိတ်ဖုံးနေတယ်။ ခြိုးခြိုးခြိမ့်ခြိမ့် မိုးခြိမ်းသံတွေလည်း ကောင်းကင်က နေရာအနှံ့…။ နေရောင်က ဘယ့်နှယ် လုပ်ဖြန့်ကြက်နိုင်မှာလဲ…။ မှောင်မည်းလုလု…။ မိုးတွေမည်း မိုးတွေထစ်ချုန်းနေသလောက် မိုးက တော့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ သဲသဲမဲမဲ မရွာသေးပါဘူး။ ခပ်ဖွဲဖွဲ လေးတော့ ကျနေပါသေးတယ်။ မနက်မလင်းခင်ကတည်းက ရွာနေတဲ့မိုးကြောင့် မန္တလေးဟာ ထုံးစံအတိုင်း ဘာအလုပ်မှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ ကတ္တရာလမ်း ပေါ်မှာ မသွားမဖြစ်လူတွေ၊ စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုက်ကား တွေ၊ မြင်းလှည်းတွေပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမှတ်(၁) အထက်တန်းကျောင်းကလည်း အတန်းပိုင် ဆရာမ ဒေါ်ခင်မြမြအေးက မိုးရွာပြီး ကျောင်းသားမစုံတော့ အတန်းဆင်းပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ထမင်းစား ကျောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့လည်း မိုးဖွဲဖွဲမှာ အိမ်ပြန်ကြ ရပါတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေက မစိုးရိမ်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်ရအောင်လို့ အဖော်ညှိတယ်။ တချို့က ရေနီ မြောင်းသွားပြီး ရေချိုးကြရအောင်တဲ့။ တချို့က နန်းတွင်းသွားရေကူးကြမယ်ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ပြောတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကျွန်တော် သွားချင်တဲ့နေရာက တစ်နေ ရာ။ ဘယ်သူလိုက်လိုက် မလိုက်လိုက် ကျွန်တော်က တော့ အဲဒီနေရာပဲသွားမယ်။ တကယ်ဆို နံနက်ကတည်းက ကျွန်တော်ကျောင်းသွားချင်လှတာမဟုတ်ဘူး။ ဆရာမကိုကြောက်လို့သာ သွားရတာ။ အခုလို ကျောင်းဆင်းပေးလိုက်တော့ ပျော်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။ ဒီကနေ့ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၇ ရက်နေ့မဟုတ်လား။
ဈေးချိုထဲမှာ ဒီနေ့ ကထိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ အေရုံ၊ ဘီရုံ၊ ရွှေဆိုင်တန်း၊ ပန်းတန်း၊ တောင်မ လွယ်၊ ဂျီရုံနဲ့ မုန့်စုံတန်းမှာ ကထိန်တွေရှိတယ်။ မိုး အေးအေးမှာ ဈေးချိုရုံတွေထဲ ကထိန်မှာ ကပြကြမယ့်အငြိမ့်တွေကို သိပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်ရုံ၊ ဘယ်အတန်းမှာ ဘယ်သူ့အငြိမ့်ရှိမလဲမသိဘူး။ ဒါကြောင့် ဘီလမ်းအတိုင်း ခပ်သွက်သွက် လျှောက်ပြီး ခန်းမ(၂)အောက်ကနေ တောင်ဘက် ကို အပြေးအလွှားဝင်လိုက်ပါတယ်။ စီရုံဘေးက အုန်းထမင်းဆိုင်တွေနားရောက်တော့ အေရုံထဲမှာ ”မြို့မ” ရှိသတဲ့။ ဒါကြောင့် အေရုံဘက် သုတ်ခြေတင်ရတာ ပေါ့။ ဈေးချိုအေရုံဆိုတာ ဆန်နဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံရောင်း တဲ့ရုံကြီးပါ။ မြောက်ဘက်တန်းအနောက်ဘက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။ အခြားရုံတွေနဲ့မတူတာက ရုံကြီးတစ်ရုံလုံး ဆိုင်ခန်းအကန့်တွေ၊ ခုံတွေမရှိဘူး။ Hall ပုံစံ ရုံကြီး ပါပဲ။ ပဲအိတ်တွေ၊ ဆန်အိတ်တွေ၊ အထပ်လိုက်စီ ထားတာတွေပဲရှိတယ်။ ရုံထဲဝင်လိုက်တော့ ”မြို့မ”တူရိယာအသင်းက တီးမှုတ်တောင်နေပါပြီ။ ပရိသတ် ကလည်း အများကြီးမဟုတ်ဘူး။ ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေးတီး မှုတ်နေတာက ရုံကြီးထဲမှာဆိုတော့ ဟိန်းလို့ပေါ့။ ပရိသတ်ကြား တိုးဝင်ကြည့်လိုက်တော့ အဆို တော်တစ်ယောက်က ”ဘုတ်တလုတ်ကန်”ဆိုတဲ့ သီ ချင်းကို သီဆိုနေပါတယ်။
သီဆိုသံက အသံခပ်ပါးပါးလေး။ ဒါပေမဲ့ အဆိုကပါးနပ်လှပါတယ်။ ကိုယ်ဟန်နွဲ့နွဲ့။ အဝတ်အစားက ခပ်ယဉ်ယဉ်။ တစ်ပတ်လျှိုဆံထုံးလေးနဲ့။ ထူးခြားတာက မျက်လုံးလေးမှေးစင်းနေခြင်းပါ။ သူ..သူ့ကို မြင်ဖူးတယ်။ မြင်ဖူးတယ်။ ဘယ်သူပါ လိမ့်…ဘယ်သူပါလိမ့်။
ဒီအသံနဲ့ ဘုတ်တလုတ်ကန်၊ ဒီမျက်ဝန်းမှေး စင်း…။ အား…ဒါဆိုရင် သူဟာ အဆိုတော် ”ထား” ပဲပေါ့။ ဟုတ်တယ်။ ”ထား”ပါပဲ။
အဲဒီတုန်းက အဆိုတော်ထားတို့ မိသားစုက မန္တလေးစိန်ပန်းရပ်ထဲမှာနေကြပါတယ်။ မိုးကခပ်ဖွဲဖွဲ လေးရွာနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ မဟုတ်သေးဘူး။ အသံမထွက်ဘဲ ရွာနေတဲ့မိုး။ ဒါကြောင့် အေရုံ ထဲက မြို့မတီးဝိုင်းရဲ့ သီသံ၊ ဆိုသံ၊ တီးသံမှုတ်သံတွေကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။ အနှောင့်အယှက်မဖြစ် ရုံမက အေးအေးဆေးဆေးသက်သက်သာသာပါပဲ။ အဆိုပိုဒ်မှာ မြို့မဦးငြိမ်းလေးရဲ့ တယောလေး က နွဲ့နွဲ့လေးအပီလိုက်ပေးပါတယ်။
နဝင်တေးချိုချို၊ ရွှေနန်းတော်တွင်း ကြာမျိုး သင်းတယ်။
တူတူပုန်းတမ်း ကစားကြပါသတဲ့ကွယ်…” တဲ့။
အဲဒီနေ့က အဆိုတော်”ထား”ကလည်း သီချင်းအများကြီးဆိုသွားတယ်။ သန်းမြတ်စိုးကလည်း လူမိုက်နှင့်ငွေတို့၊ ပြည်တော်ဝင်တို့၊ တောင်ပြုန်းတို့ သီချင်းတွေဆိုသွားတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အခုလိုကထိန်ပွဲရာသီရောက်ရင် ဈေးချိုထဲကကထိန်တွေကို သိပ်သတိရတာပဲ။ တန် ဆောင်မုန်းလဆန်း ၇ ရက်နေ့ရယ်၊ လဆန်း ၁၃ ရက်နေ့ရယ်ဆို အစည်ဆုံးပါပဲ။ ဟိုရုံက သည်ရုံ၊ ဟို အတန်းကသည်အတန်း ကူးကူးပြီး ပွဲကြည့်ကြရုံပါပဲ။ ဈေးချိုလို ထိပ်တန်းနေရာမှာ နေ့လယ်ပွဲ တစ်ချိန်တည်း ”က”ကြရတော့ အဝတ်အစားကအစ ခိုလို့မရ ဘူး။ အားကြိုးမာန်တက် ”က”ကြရတာပေါ့။ ဈေးချိုမှာ ပြောစမှတ်ဖြစ်ကျန်ရစ်တာ ကထိန်ပွဲတွေပါ။ အရောင်းအဝယ်သမား မြို့မျက်နှာဖုံး ရွာ နေပြည်ထိုင်များဆိုတော့ အလှူအတန်းကလည်း ရက်ရောကြတယ်။ ကထိန်တွေမှာ အပြိုင်အဆိုင်လှူကြတန်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးချိုကထိန်ဆိုတာ အကြီးအကျယ်လှူကြတန်းကြတဲ့ပွဲပါ။ အပြိုင်အဆိုင် အငြိမ့်ခံကြတဲ့ပွဲပါ။
ဈေးရောင်းရင်း…လာသမျှလူဧည့်ခံရင်း၊ ရုံထဲမှာ လှူဖွယ်ဉတ်မကြီးကို ခင်းကျင်းပြီး ဆိုင်ပေါ်ကနေ အငြိမ့်ကြည့်ကြရတဲ့ နေ့ခင်းပွဲဆိုတာ မြန်မာ ပြည်မှာ ဒီတစ်ပွဲတည်းရှိမှာပါ။ ရုံထဲမှာ ရောင်းချကြတဲ့ဈေးသည်တွေနဲ့ အငြိမ့်မင်းသမီးတွေနဲ့ လူရွှင် တော်တွေဆိုတာ အသိအကျွမ်းတွေချည်းဆိုတော့ စင်ပေါ်ကနေ စကြ၊ ပြောင်ကြ၊ နောက်ကြနဲ့ ပျော်စ ရာကြီးပါ။ မန္တလေးရဲ့ နာမည်ကြီးအငြိမ့်တွေဖြစ်တဲ့ သစ်လွင် တို့၊ ရတနာပုံတို့၊ လမင်းတရာတို့၊ ရွှေရတနာတို့၊ အောင်မြေအေးတို့၊ မြို့တော်တို့ကို တစ်ရက်တည်း တစ်နေရာတည်း ဟိုစင်၊ သည်စင် ကူးပြီး ကြည့်ရ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေရောက်တော့ မန္တလေး သိန်းဇော် နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါ ရွှေဆိုင်တန်းကထိန်ဆိုရင် နှစ်တိုင်းလာပြီး ကပြလေ့ရှိတယ်။ မန္တလေးသိန်းဇော် နာမည်ကြီးတာနဲ့တစ်ချိန်တည်း မန္တလေး Shells တီး ဝိုင်းကအမြဲပါတယ်။ အဲဒီနေ့ဆိုရင် အလယ်ပေါက်ကြီး တစ်ခုလုံး တစ်ညပ်ပိတ်ဆို့သွား တာ့တာပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ သစ်သီးတန်း ကထိန်အတွက် ဈေးရုံအရှေ့ဘက်မှာ Shells ပါတယ်ဆိုရင် သစ်သီးတန်း၊ ထိုးမုန့်တန်းမှာ လူတွေပိတ်ဆို့သွားလိုက်တာ သံဖြူတန်းကြီးအထိ ရောက်ရော…။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဈေးချိုကထိန်တွေမှာ မန္တလေး အငြိမ့်တွေ၊ မြို့မလိုတီးဝိုင်းတွေအပြင် ခေတ်ပေါ်စတီ ရီယိုဝိုင်းတွေပါ နေရာယူလာပါပြီ။ ၁၉၈ဝနဲ့ ၈၇ အကြားကာလတွေပေါ့။ စတီရီယိုဝိုင်းတွေက နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်က နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေ၊ ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတွေလည်း ပါဝင်လာကြပါတယ်။
ရှေးကတော့ ဈေးချိုကထိန်တွေဟာ မန္တလေးမှာခင်းကျင်းပြီး ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဘက် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးက ချောင်တွေ မှာပဲလှူကြတာပါ။ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှင်ဖြူရှင်လှဘုရားကြီး အထက်မှာ ”ဈေးချိုချောင်”ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဈေးချိုကထိန် တွေကစုပြီး အဆောက်အအုံတွေ လှူဒါန်းထားကြတာပေါ့။ စစ်ကိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်း၊ ချောင်တိုင်းမှာ ဈေးချို ကထိန်တစ်ခုခုကလှူထားတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့ အနည်းဆုံးရှိတတ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးမတိုင်ခင်ခေတ်က ယိုးဒယား(ထိုင်း)ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် မော်လမြိုင်ဘက်ကို အရောက် အပေါက်များတဲ့ ဈေးချိုရုံတချို့ကတော့ မော်လမြိုင်နဲ့ မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်းမြို့တွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ကထိန်ခင်းကြ တာမျိုးလည်းရှိလာကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းရောက်တော့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလို ဒေသန္တရဗဟုသုတအတွက် ဘုရား ဖူးခရီးထွက်ရင်း ကထိန်ခင်းကြတဲ့ဓလေ့က ဈေးချိုမှာလွှမ်းမိုး သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်းလေး၊ စက်စဲ၊ ကျိုက်ထီးရိုး၊ ငပလီ၊ အင်းတော်ကြီးစတဲ့ နေရာတွေသာမက မြန်မာပြည် အစွန်အဖျားကမြို့တွေဆီအထိ ဈေးချိုကထိန်တွေ ပျံ့နှံ့သွားပါ လေရော။
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း ဈေးရုံ ရုံဟောင်းကြီးတွေ ဖျက်ပြီး အခုအဆင့်မြင့်ရုံသစ်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါ ဈေးချိုကထိန်တွေရဲ့အနေအထားက အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အရင်လို ရုံထဲမှာအငြိမ့်ကပွဲကလို့မရတော့ပါဘူး။ ဈေးချိုသူ၊ ဈေးချိုသားဆိုတာကလည်း ပြောင်းလဲကုန်ကြတော့ ”ရိုးရာ”ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ ပါးလျားကုန်တယ်။ ပေါ်ပင် အသစ်အဆန်းကိုပဲ မက်မောသူများလာတယ်။ အငြိမ့်မကြည့် ချင်ကြတော့ဘူး။ မြို့မနားမထောင်ချင်တော့ဘူး။ နာမည်ကြီး စတီရီယိုအဆိုတော်တွေမဟုတ်တောင်မှ မန္တလေးရဲ့စားသောက် ဆိုင်ကြီးတွေက မြို့ကျော်၊ ရပ်ကျော်ကာရာအိုကေမလေးတွေ လောက်တော့ အနည်းဆုံးပါမှ ဘဝင်ကျကြတော့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်ကဆိုရင် ဈေးချိုကထိန်မှာရုံကြီး ထဲဝင်တိုးလို့မရတော့ ဘီလမ်းပေါ်၊ ၈၄ လမ်းပေါ်၊ အလယ် ပေါက်နေရာ ၂၇ လမ်းပေါ်မှာ စင်တွေထိုးပြီး စတီရီယိုဝိုင်းတွေက တီးခတ်အော်ဟစ်ပေါက်ကွဲကြတာပေါ့။ နာမည်ကျော် ကာရာအိုကေ အဆိုတော်လေးတွေလည်း စကပ်လေးတွေ၊ ဘောင်းဘီတို၊ ဘောင်းဘီရှည်တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ဟစ်ကြတာ လမ်းတွေပိတ်ဆို့ကုန်ပါလေရော။ လက်ဟောင်း မန္တလေးသားကြီးတွေက အစွဲကြီးကြီးနဲ့ သမားရိုးကျကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ ”မြို့မ”ကို ငှားရမ်းလေတော့ မြို့မရှေ့မှာ ပရိသတ်ရောက်မလာလို့ ကထိန်အကျိုးဆောင် ကော်မတီက ကားတစ်စီးနဲ့ချက်ချင်းပဲ ကာရာအိုကေအဆိုတော် တွေကို တစ်ဆိုင်တက်ဆင်းရှာရပါလေရော။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေ့ က မန္တလေးမှာ ဘယ်ကာရာအိုကေအဆိုတော်မှ မအားတော့ ပါဘူးတဲ့။ တန်ဆောင်မုန်း မိုးစွေစွေမှာ အရင်ရှေးတုန်းကလို အေရုံ ထဲကမြို့မမှာ တယောလေးတအိအိနဲ့
ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို လွမ်းဆွတ်လှပါတယ်လို့ပြောရင်… အခုဈေးချိုတော် ကံ့ကော်ရုံ၊ နှင်းဆီရုံ၊ မြလေးရုံ၊ စံပယ် ရုံတဲ့ရုံတွေက ဈေးချိုသူ၊ ဈေးချိုသားလေးတွေက နှာခေါင်းရှုံ့ကြတော့မှာသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ”ထား”နဲ့ ရင်ခုန်တဲ့ခေတ်။ ။
ယိုယွင်းနေသည့် အောင်ဆန်းကွင်းကို ငှားရမ်းထားသူထံမှ ပြန်လည်ရယူပြုပြင်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်မှစတ?
ရေခဲတောင်သို့ သွားရောက်ရိုက်ကူးမည့် 'ဒို့ပိုင်တဲ့မြေ' အပါအဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကား မိတ်ဆ?
ရွေးကောက်ခံ အမတ်နှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌရှေ့မှောက်တ
ဖိလစ်ပိုင်မှ မြန်မာ့ဆန် ဝယ်ယူရေး တင်ဒါပြိုင်ရန် မသေချာသေး
ဆိုင်ကယ် အဟောင်းများမှ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီ မော်တော်ယာဉ်ကို တီထွင်သူ ဦးေ??